တောက် . . . ခံပြင်းလို့ပါဗျာ၊ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တောက် . . . ခံပြင်းလို့ပါဗျာ၊
တောက် . . . ခံပြင်းလို့ပါဗျာ၊
Posted by mggwa on Feb 12, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာလို့သိအောင် လုပ်ပြနေတာ တိဘက် ဒလိုင်းလားမား မဟာယာနနှင့် ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ ဘုန်းကြီးများသာဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေက ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ မရှိရင် သာသနာမပြုတတ်တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ (ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်ပြနေတာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲ) ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေလိုက်ရလို့ ခံပြင်းလိုက်တာဗျာ။
ကျုပ်တို့ ဗမာဘုန်ကြီးတွေ ဘာလုပ်နေလို့လဲ?
မအားမလပ်အောင် အလုပ်တွေ လုပ်နေကြတာ ကမ္ဘာက မသိကြလို့ပဲဗျ။
နေ့ည မအား ဘောလုံးပွဲတွေ ကြည့်နေရတယ်၊
ချဲဂဏန်းတွေ တွက်နေ၊ ပေးနေရတယ်။
တရားပွဲတွေမှာ တစ်ပါးနဲ့ တစ်ပါး ပလ္လင်လုပွဲတွေ ဖိုက်နေရတယ်။
တစ်ပါးကို တစ်ပါး နှိပ်ကွက်ဖို့၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ထောင်ချဖို့တွေ လုပ်နေရတယ်။
ကျောင်းကောင်းကောင်းမှာ ကျောင်းထိုင်နိုင်ဖို့ လုပ်နေရတယ်။
ကျောင်းထိုင်ပြီး ရွာစားကြီးတွေ၊ နယ်စားကြီးတွေလို အပိုင်စားဖို့ လုပ်နေရတယ်။
ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေထောင်ပြီး ကိုရင် (ခလေး)တွေကို စက်ရုပ်တွေလို စာတွေ အလွတ်ကျက်ခိုင်းဖို့ လုပ်နေရတယ်။
စာတွေအလွတ်ရပြီး ကိုယ်လိုပဲ စာတွေအလွတ်ရသူ (စက်ရုပ်လူ)တွေ ပြန်မွေးထုတ်ပေးဖို လုပ်နေရတယ်။
ကမ္မဋ္ဌာန်းဗန်းပြပြီး ရိပ်သာကြီးတွေထောင် လူတွေကို ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့တဲ့ သူတွေဖြစ်အောင် ပုံစံခွက်ထဲ ထည့်ပေးနေရတယ်။
. . . . . . . . . . . . . . . . . . လုပ်နေရတယ်။
ကိုယ်နားလည်နေသလို ထင်ရာ မြင်ရာတွေ အဲဒီလို မအားအောင် လုပ်နေကြရတာကို
အဲဒီဆောင်ပါးရှင်က ဗျာ . . . ရေးရက်လိုက်တာ ကြည့်စမ်းပါဦး၊ ဘာတဲ့ . . . . .
အခုမြင်နေတရတဲ့ ဓာတ်ပုံကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဝဒ်ဓမ္မကိုင်ကျောင်းအတွင်းမှာ လူပေါင်းတစ်သိန်းကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှင်ပြုပွဲ ရဟန်းခံပွဲများကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ (ထိုကျောင်းတိုက်ကို တည်ထောင်သူဟာ ထိုင်မယ်သီလ တစ်တစ်ပါးကနေ စပြီးတည်ထောင်ပါသည်)
(မဟာယာန အယူရှိသော ဒလိုင်းလားမား နှင့် အမေရိကန်လက်ရှိသမ္မတကြီး အိုဘားမား)
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဒလိုင်းလားမား နှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ
(ဗုဒ်ဓဘာသာကို ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်အတော်များများကသိနေတာ ဒလိုင်းလားမား နှင့် ဦးဂိုအင်ကာတို့က အဓိကအခန်းက ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတရှိသူတိုင်းသိတယ်။ တို့ထေရဝါဒက သာသနာပြုနေလုိ့ ကမ္ဘာကသိတာဆိုပြီး ရမ်းမချပါနဲ့၊ ရွာမှာနေတဲ့ကလေးတွေကိုသွားပြော သူတို့က ဗဟုသုတမရှိဘူးတော့ ယုံတာပေါ့၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာတော်များ ဒီလောက်ထိ ဘယ်ဆရာတော်မှ မစွမ်းနိုင်ပါ။
မြန်မာရဟန်းတော်များက မဟာယာနတွေ ထေရ်ရဝါဒတွေပြောနေရင်လဲ အပိုပဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲ ခွဲခြားဆက်ဆံနေရတာပါ။ ပြည်ပထွက်ကြည့်ပါ။ ထေရဝါဒဆိုသူတွေ မဟာယာနဲ့ အတူတူ ဆွမ်းများ ဘုဉ်ပေးကြပါတယ်။ ….. ထိုင်း သီရိလင်္ကာဆိုတာ ထေရဝါဒ အမည်ခံပဲ။ ဒါပေမယ့်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေလောက် သဘောထားမကျဉ်းမြောင်းပေ။ အချင်းချင်း ရုံးတွေ ဂါတ်တွေကို မရောက်ကြပေ။
မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများကို စက်တင်ဘာဖြစ်တုန်းကတော နဲနဲသိသွားတယ်ဗျ။ တရားပြလို့သိတာမဟုတ်ပါ၊ အမျိုးသားရေးအတွက် အသက်တွေပေးခဲ့လို့သိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဝိပဿနာနဲပါတ်သတ်ရင်လဲ ဦးဂိုအင်ပဲ ကမ္ဘာကသိတယ်။ သူဟာ ကုလအတွင်းရေးမှူးဟောင်းကိုဖီအာနန် ဇနီးနှင့်၊ အမေရိကန်သမ္မဟောင်း ကလင်တန်၊ အစ္စလာန်တို့ရဲ ခေါင်းဆောင် မိုဟာမက်မွေးခဲ့သော မကာမြို့လဲ ဘုရားတရားတွေကို ချပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလောက် ကြီးမားတဲ့ ဝိပဿနာ တရားတွေကိုဟောပြနေခြင်းဟာ လူသားဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးတွေ ဝိပဿနာပြတယ်ဆိုတာ လူအများစုတကယ်ကို မသိတာပါ။ (မဟာစည် မိုးကုတ် ဖားအောက် ဆရာတော်များကတော့ တကယ့်ကို သာသနာအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံပြုလုပ်နေကြပါသည် ထိုဆရာတော်တို့ရဲ့ ဓမ္မတွေလည်း ကမ္ဘာမှာ စွမ်းနိုင်သလောက် ပျံနှံအောင် ပြသနေပါသည်၊ ၄င်းဆရာတော်တို့ကား အယူဝါဒ မတူညီတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ထောင်ချသင့်သည်ဟု မပြောကြားပေ ထိုဆရာတော်များကိုတော့ လေးစားပြီး ကြည်ညိုမိပါတယ်) (အထူးအားဖြင့် ပြည်တွင်းမှာရှိနေသော ယောဆရာတော်ကိုလဲ အတုယူလေးစား ဂုဏ်ယူစရာ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်) ။ သီလဂုဏ် သမာဓိဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းတော်များသည် ဒီပို့စ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါ။ ဘုန်းကြီးအချဉ်းချဉ်းကို ထောင်ချသင့်သည်ဟု ဆိုသော ရဟန်းများကို ဆိုလိုသည်)။
ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီး အရေးတွေလဲ ကြားလိုက်ရရင် စိတ်မကောင်းစရာတွေကြည့်ပါပဲ။ ဟိုဘုန်းကြီးက မှားတယ် ဒီဘုန်းကြီးမစ္ဆာနဲ့ ငြင်းခုန်နေကြတာနဲပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်။
တစ်ချို့ကပြောသေးတယ်။ တို့က သာသနာအတွက်ဆိုရင် အသက်ပေးတယ်။ ဘာာညာညာ ပေါဗျာ၊ အသက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဘုရားက ငွေမကိုင်နဲ ပြောထားတယ်။ အဲဒီ သိက္ခာပုဒ်လေးကိုပဲ စောင့်ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ (လေကျယ် ရဟန်းအတွက် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
အဲဒီလို ရေးသင့်ရဲ့လား ဗျာ၊ ဘယ်လောက်ခံပြင်းစရာကောင်းသလဲဆိုတာ၊
တို့ဘုန်းဘုန်းတွေမှာတော့ မအားမလပ်အောင်လုပ်နေကြရရှာတာ . . . . . . . ။
(လူတွေက အသုံးမတည့်လို့ မသုံးတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ သူတို့လည်း သူတို့ သိတာ တတ်တာလုပ်နေရတာပဲ ဟာကို ။)
online မှာ ကိုယ်တော်တို့ ချက်တင်ထိုင်တာကိုလည်း မပြောပါဘူး
ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်တာကိုလည်း မပြောပါဘူး
ညနေတိုင်း ဘောလုံးကန်တာကိုလည်း မပြောပါဘူး
နေရာတစ်ကာ ၀င်ပြောရအောင် ကိုယ်လည်း သမ္မတ မဟုတ်
မြန်မာပြည်မှာနေရင် စိတ်ရှည်သည်းခံ ရတယ်ကွဲ့။
ပြောရင်လည်း တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်ထက် ပိုရှည်လိမ့်မယ်
ချဲထီထိုး၊ ဘောလုံးပွဲကြည့်၊ ဂိမ်းဆော့ ၊ ဘောလုံးကန်…
ရဟန်းတော်တို့သည် ကမ္မဋ္ဌာန်း( လောကအကျိုးဆောင်သော အလုပ်) လက်လွတ်နေလို့ မသင့်ပေ။
နေ့ည မအား ဘောလုံးပွဲတွေ ကြည့်နေရတယ်၊
ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဘာသာရေးတွေထဲမှာ အသာဆုံးဗျ ဘာသိလို့လဲ။ မဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရာမှာ ပြောတာပါ ဟဲ…ဟဲ။ သူများကျွေးတာအသာစား ငေါက်လိုက် ငန်းလိုက် ခြောက် လိုက် ခြမ်းလိုက် လုပ်နေကြတာပါ။ ဒါကြောင့်မအားတာပါ။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြပါ ဟဲ…ဟဲ။
မတူညီတာတွေကို အတင်တူအောင်ညှိမနေ၊ နှိပ်ကွက်မနေကြပဲ တူညီတာလေးတွေနဲ့ ဘယ်လို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ကြမလဲ၊ ဒါလိုရင်းပါပဲ။
(စား၊ ၀တ်၊ နေရေးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်သာများခြင်း)…။
မောင်ဂွ လည်း မခံစားနိုင်တော့ဘူးထင်ပါ့…။
ရေရေလည်လည် ခံစားရလို့ပါ နေ၀န်းနီ။ . . . ဗျဲ . . . ။
ချက်တင်ထိုင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ချဲထိုး၊ ဘောပွဲလောင်း၊ ဗေဒင်တွက်…. တော်သေးတာပေါ့…
သင်္ကန်းကြီးနဲ့ အဗြဟ္မစရိယာ ကို ဗြဟ္မစရိယာတွေလုပ်တာ ရှိသေးတယ်…
ဒီအခြေအနေတွေမှာတောင် သာသနာကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ သာသနာ့အာဇာနည် ဆရာတော်ကြီးတွေကို တကယ်ကြည်ညိုမိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ ဆွေးနွေးဖူးတယ်။
အပေါ်က မွန်မွန်ပြောသလို ကိုယ်တော်တွေ (ချက်တင်ထိုင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ချဲထိုး၊ ဘောပွဲလောင်း၊ ဗေဒင်တွက်…. တော်သေးတာပေါ့…
သင်္ကန်းကြီးနဲ့ အဗြဟ္မစရိယာ ကို ဗြဟ္မစရိယာတွေလုပ်တာ ရှိသေးတယ်…)
ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးစာမေးပွဲတွေ အရင်ကစောင့်ဖူးတယ်။ သိပ်စိတ်ညစ်စရာကောင်း
လောက်အောင် ကိုယ်တော်တွေ ဆိုးကြတယ်။
အိမ်ခြံအဝကနေ ကိုယ်တော် သုံးလေးပါးအော်ဟစ် တံခါးဖွင့်ခိုင်းပြီး ခရီးစရိတ် အလှူခံတာ
ဆိုတော့ အဲဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့  ဆုံးမစကားကတော့ သူတို့တွေ (ဒီလိုမျိုးကိုယ်တော်တွေ)
ဟာ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ သာမာန်လူတွေပဲတဲ့။ သူတို့ကို မိမိကနှုတ်ဝစီနဲ့ ပြောမှားဆိုမှား
လိုက်ရင် သူတို့ ဆင်မြန်းထားတဲ့ သင်္ကန်းအတွက် ကိုယ့်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တဲ့။
မလှူနိုင်ရင် ကန်တော့ပါသေးရဲ့ လောက်တော့ ပြောလိုက်ပါတဲ့။
သာဓကပေးတာကတော့ ဆဒ္ဒါန်ဆင်မင်းဝတ္တုထဲက သောနုတ္ထိုရ် ကိုယ်မှာသင်္ကန်းပတ်ထားတော့
“ဘုရားလိုဏ်ခေါင်း အောင်း၍ မာန်သွေးဟောင်သောခွေးကို အရေးပျူငှာ ခွင့်မသာသို့”…
လို့ ဦးပုည ရေးစပ်ခဲ့သလိုပဲတဲ့။
အဲဒီသင်္ကန်းကြောင့်ပဲ ပြောလို့မရဖြစ်နေတာ။ သံဃာ့နာယကအနေနဲ့လည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်ပါတယ်။
ဲကြာရင် တကယ်သာသနာ့အကျိုးဆောင် ဦးပဇဉ်းတွေပါ အကြည်ညိုပျက်ပါတယ်။ စေတနာကိုတောင် သို့လောသို့လောနဲ့ သံသယ၀င်စေပါတယ်။
ဘုန်းကြီး ကိစ္စကို လူအနေနဲ့ မဝေဖန်ချင်လို့ …. ဆိတ်ဆိတ်နေပါ့မယ် ။
ပြောရလျှင် နေရာတိုင်းမှာ အဆိုးနဲ့ အကောင်းဒွန်တွဲနေကြတာချည်းပါပဲ ….. ။
၀တ်နည်းတော်နဲ့ အညီနေတဲ့ ဘုန်းကြီးရှိသလို ၊ မနေတဲ့ ဘုန်းကြီးလည်း ရှိတယ် … ။ ဒီတော့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးမရမ်းပါနဲ့ နော် ….. ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ဆိုလျှင် …. ဘုန်းကြီးတွေကို ကြည့်ပြီးဝေဖန်နေတာ … ဘယ်လောက် အကုသိုလ်များလဲဆိတာ .. သိသင့်ပါတယ် … (ဝေဖန်ခံရတဲ့ ဘုန်းကြီးတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါ )
မကောင်းတာ လုပ်လျှင် မကောင်းတာ ဖြစ်မယ် … ဒီသဘောလေးပါပဲ ။
ဟုတ်မှန်ပါသည် ၊ သံဃာ့အရေး ဝင်ဆွေးနွေးရန် မသင့်တော်ပါ ။
ငါးပါးသီလ ကိုတောင် လုံအောင်မထိမ်းနိုင်သေးသော လူများအနေဖြင့်
ကိုယ်အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်…….) ဆိုတဲ့ စကားအသွာအလာဟာ လူမျိုးကြီးဝါဒဆန်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါဟာလည်းရှေးခေတ်က ရှင်ဘုရင်တွေက သူတို့ကို ပြည်သူပြည်သားတွေက မဝေဖန်ရဲအောင် အာဏာနဲ့ခြောက်လှမ့်ခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုးလိုပါပဲလို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။
ဘုန်းကြီးရယ်၊ လူရယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ထက် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရဲ့ အကောင်အဆိုးပေါ်မူတည်ပြီး ပြောဆိုဝေဖန်ဖို့ အချိန်အခါရယ်၊ အခါအခွင့်အလိုက် လောကကောင်းဖို့အတွက် ဝေဖန်သင့်ပါတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကိုယ်အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်…….) ဆိုတဲ့ စကားအသွာအလာဟာ လူမျိုးကြီးဝါဒဆန်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ }
လူမျိုးစွဲမပါ လူသားစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံနိုင်ကြဖို့က အဓိကပါလို့ ထပ်လျှာရှည်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ
တိုင်းပြည်မှာ ပရိရတ်သာမ ပရိပါတ်ပါ တကယ် လုပ်ခြင်လို့ ၀တ်ကြောင်စိတ်ကုန်တဲ့ သူများသာ သာသနာ့ အမွေခံသင့်ပါတယ်….
စေတနာစကားဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ နားခါးတတ်ပါတယ်။ အစားရချောင်လို့ ဘုန်းကြီးဝတ်၊ စစ်ထဲဝင်သူတွေများလာရင် ပြည်နာပါတယ်….